Jelly of oatmeal - Russian namafutha izotovsky
Oat ishq, okuyinto bavame ngokuthi futhi "Hercules", liwumkhiqizo ewusizo kakhulu. Izidlo wabo ukusiza ukuqeda izifo eziningi bese qeda umzimba iyonke. Ikakhulukazi ephulukisa izakhiwo jelly iyahluka kwenye oat ishq. Lokhu isiphuzo isimangaliso owadalwa uDkt Izotov, esekelwe zokupheka wawobaba.
Phela, ekhulwini XVI, oatmeal bekugcwele ethandwa kakhulu izitsha Russian cuisine kazwelonke futhi kubhekwa ithuluzi elihle ukwelapha ubende, okubangela ngesikhathi wabizwa ngokuthi "selezenochnika". Kodwa ngokuhamba kwesikhathi, elidala iresiphi sekulibalekile. Kwakungenxa nje ekuqaleni we XX leminyaka udokotela-virologist V Izotov wafunda iresiphi lasendulo sezihambile eziningana, wanikela njalo kudliwa njengoba umlingo wokususa bonke abantu. Kisel oat ishq owaziwayo West njengoba "namafutha Russian" futhi iyathandwa ikakhulukazi phakathi kwalabo abanendaba ngempilo yabo. Emva kokuthatha ke njalo, endaweni yokuqala, ungakwazi ezifweni yokusetshenziswa pheshana emathunjini, kusukela isiphuzo iqukethe esibalulekile acidosis acid amagciwane. Ukusetshenziswa Its futhi kukunika ekuqhumeni amandla, kuqinisa amasosha omzimba nethonya elizuzisa isimo izinwele isikhumba. angapheka kanjani Pudding of oatmeal? Ukuze wenze lokhu, kuzomele uqale wenze CONCENTRATE kuyiphi-ke uzobe ukwenziwa isiphuzo.
Thatha imbiza 5 litre kanye awathele 3 amalitha abilisiwe lokushisa lamanzi 30-35 degrees.
I oluthile lokudla imbiza vsypte "Hercules" (500 amagremu) futhi uthele yogurt (100 g). Vala lid, ukugoqa nendawo endaweni efudumele (isibonelo, eduze ibhethri). Phakathi namahora angu-24-36 ukuvutshelwa ngizoya.
Khona-ke ukuhlunga enkulu ngokusebenzisa colander noma strainer (imbobo ubukhulu 2 mm) komunye jar ezinhlanu-litre. Ukuqina, kwaba eqoqwe e isihlungi, ibangele ngamandla, hashaza ngamanzi abandayo. Isixazululo okuholela ibhange kumele yakhiwe 1 ingxenye inhlama 3 izingxenye ketshezi.
I ehlungiwe mass ikhefu ku sump amahora 16-18. Ngemva kwalokho-ke exfoliate emazingeni ezimbili: phezulu - ketshezi, phansi - okuxekethile. ukususa ngokucophelela tube esebenzisa engxenyeni engenhla. Labo abasele abanga-ungqimba ephansi - oatmeal ukugxilisa ingqondo.
Thela isixazululo, wayithela ezitsheni ezincane bese efakwa imbala lapho zingagcinwa izinsuku ezingaphezu kwezingu-21.
Kuyaphawuleka ukuthi le iresiphi ezihlongozwayo ingahluka, kuye ngokuthi ukunambitheka yakho. Ngokuhamba kwesikhathi, njalo ukulungiselela isiphuzo, uzothola wena ingxenye ezifanele kakhulu.
Thatha spoonfuls 5-10 yokudlela ukugxilisa ingqondo futhi uhlanganise ngamanzi abandayo (500 ml).
Ngezinye ukushisa low, ibangele njalo ngesipuni sokhuni, ubilise imizuzu emihlanu kuze kube uqweqwe.
Engeza ibhotela, uwoyela noma ubhekilanga amafutha omnqumo usawoti kancane. Jelly ulungile!
Kunconywa ukuthatha ngesimo ukushisa kwasekuseni, namaqebelengwane abamnyama. oatmeal Izotovsky ku imenyu zihlanganisa indlela yokudla ehambisana nempilo ahlukahlukene kwesisindo nempilo ngcono.
Ukudla Weekly oatmeal kanye nokunye okufana nokolweni
Ingqikithi yale Ukudla wukuthi uvunyelwe ukuba ukudlele ngokuyisisekelo nje ofakwe noma steamed "Hercules" kanye nokunye okufana nokolweni. Ngezinye izikhathi asetshenziswa incumbe abilisiwe ngezithelo ungeze nojeli uju kanye oatmeal. Nale Ukudla uzolahlekelwa ngesonto kufika ku amakhilogremu eziyisihlanu kuya kweziyisikhombisa. Lokhu Ukudla pretty ezinzima, njengoba imikhiqizo agunyazwe ungadli kakhulu ngaso sonke isifiso. Ngakho, ngaphambi kokuba athathe ingozi ukuzama ukucabanga le ndlela okuhlanza umzimba, kuyadingeka kudokotela. Ukuze uqalise, zama ukwenza usuku olulodwa athula ngesonto, kulandela imithetho yokudla.
Yidla ukudla walungisa ngokusho Folk zokupheka! Kuyinto esihlwabusayo futhi unempilo!
Usezingeni ATP e ithenisi: ukubala, isimo samanje